Vamwe vakwikwidzi kuchengetedza Linux iri mupenyu mune nharembozha | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Zvimwe Linux, Resources
Isu tataura kare muLxA nezve akasiyana mapurojekiti e nhare neLinux. Mamwe mapurojekiti matsva anowedzerwa kuti awedzere mikana nerudzi rwechigadzirwa. Isu tese tinoziva mapurojekiti senge OpenMoko, Greenphone, LiMo, mapurojekiti akaita saMoblin, MeeGo, Mer, Firefox OS, Tizen, Sailfish, Ubuntu Kubata, LineageOS, Replicant, PrivateOS, mamwe acho akatosiiwa uye atakataura kwenguva refu mune izvi Blog. Isu takazivawo zvimwe zvinonakidza zvigadzirwa zvemahara zverudzi urwu rwezvigadzirwa zvemafoni, nezvimwe. Zvakanaka, mikana iri muchikamu ichi inoramba ichiwedzera.
Nguva pfupi yadarika takasangana neakakurumbira ZeroPhone yakagadzirwa neHackaday chirongwa cheDiY uye yakavakirwa pane inozivikanwa Raspberry Pi Zero bhodhi sehwaro hweiyi modular nhare mbozha iwe yaunogona kuzvibatanidza iwe pachako. Iyo yakavhurika sosi yemidziyo yekudzidzira nekuzvivaraidza iwe nemutengo wakaderera we $ 50. Isu takataurawo nezveLibrem 5, smartphone ine 5 ″ skrini uye zvimwe zvinehunhu zvakasara zvakagadzirwa nePurism. Librem 5 yakanangana nekuchengetedzeka uye kuvanzika sehunyanzvi hwayo hukuru, uye hwakavakirwa paLinux sezvo yakavakirwa pane inoshamisa chirongwa Plasma Mobile, iyo inoshanda sisitimu yemidziyo nhare kubva kuKDE. Zvese izvi zvinopa tariro uye zvinogona kuramba zviri zvipenyu mamwe mapurojekiti seSailfish, inozivikanwa yeLinux-based operating system yemafoni nhare kubva kuFinnish Jolla, WebOS / LuneOS, yakagamuchirwa zvakanyanya neLG, kana Tizen neSamsung, nezvimwe. Kubvisa mapurojekiti akashaikwa ataurwa mundima yekutanga, ndinofanira kutaura kuti ikozvino taona nyowani dzinonakidza dzakafanana nePostmakertOS, Halium, nezvimwe, kunyangwe zvimwe zvakasiyana zveApple zvauchatoziva futi.
PostmarketOS iri muchikamu chekutanga chebudiriro uye yakavakirwa nekuenderana kune ese maApple madivayiri Parizvino ine yakakosha mashandiro uye inoshanda chete paNexus uye mamwe mamodheru. Kune rimwe divi isu zvakare tine chirongwa chitsva halium, neimwe nzira. Iri zvakare mudanho rekutanga, asi kumwe kugoverwa asi chimiro chemahara chakagadzirirwa kudzokorora kudzokorora kodhi uye kupatsanurwa nemaLinux-based mobile operating system, saka zano rakakura rinogona kusimudzira mamwe masisitimu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Vamwe vakwikwidzi kuchengetedza Linux iri mupenyu mune nharembozha